बलात्कार एकः सजाय र परिभाषा अनेक, बलात्कारीलाई कुन देशमा कस्तो सजाय ? | Rajmarga
बलात्कार पछिल्लो समय कहालीलाग्दो बनेको छ। बलात्कारीले कलिला बालिकादेखि वृद्धालाई समेत निशाना बनाउने गरेका छन् । नेपाल, भारतजस्ता मुलुकमा बलात्कारका घटना दिनहुँ बढेको देखिएको छ। त्यसैले बढ्दो बलात्कारसँगै कडा कानुनको माग पनि बढ्दो छ। नेपाल, भारतलगायतका मुलुकमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ। के कडा कानुन नै बलात्कार रोक्ने उपाय हो कि अरु केही हुन सक्छ ? अहिले सबैतिर बहसको विषय बनेको छ। विश्वका कुन मुलुकमा कस्तो छ त बलात्कारीलाई सजायसम्बन्धी कानुन ?
भारतमा ‘रेयरेस्ट अफ द रेयर’ घटनामा मात्र फाँसीको सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ। साना बालिका बलात्कारका घटनामा पोक्सो एक्टअन्तर्गत दर्ता मुद्दा दर्ता गरिन्छ । यो कानुनमा बच्चा बलात्कारमा दोषी ठहरिए १० वर्षदेखि आजीवन कैद सजायसम्मको प्रावधान छ।
यद्यपि मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाण सरकारले आफ्नो आफ्नो राज्यमा १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका बलात्कारको मामिलामा फाँसीको साजय दिने विधेयक तयार गरेका छन् र यो कानुन बनाउने तयारी भइरहेको छ।
दिल्लीमा यसैप्रकारको कानुन पारित गर्नका लागि दिल्ली महिला आयोगकी अध्यक्ष अनसन बसेकी छन् । उनी एक कदम अगाडि बढेर कलात्कारीलाई ६ महिनाभित्र फाँसी दिनुपर्ने माग गरिरहेकी छन्।
केन्द्रीय महिला एवं विकास मन्त्रालयले पनि मध्यप्रदेश, राजस्थान र हरियाणाको नयाँ विधेयकप्रति चासो राख्दै राष्ट्रियस्तरमा पोक्सो एक्टमा परिवर्तनको कुरा गरिरहेको छ।
संसारमा बलात्कारीलाई सजाय ?
पूरै विश्वमा बलात्कारका विषयमा फरक फरक सजायसम्बन्धी कानुन छ। कयौ देशमा बालिकाका साथ यौन शोषणलाई बलात्कारभन्दा ठुलो अपराध मानिएको छ।
नेशनल ल युनिभर्सिटी दिल्लीमा शोध गरिरहेकी रिसर्च एसोसिएन नीतिका विश्वनाथ भन्छिन् कि संसारमा दुई प्रकारका देश छन् । एउटा त्यो जहाँ फाँसीको सजायको प्रावधान छ तर बालिका बलात्कारका लागि होइन । दोस्रो त्यो देश जहाँ कुनै पनि अपराधका लागि मृत्युदण्डको सजायको प्रावधान नै छैन ।
मृत्युदण्ड दिने मुलुकहरु
नीतिकाका अनुसार जुन मुलुकमा अपराधका लागि मृत्युदण्डको सजायको प्रावधान छ, ती देशहरुलाई रिटेशनिस्ट देश भन्ने गरिन्छ ।
उनका अनुसार यस्ता कयौ रिनेशनिस्ट देशमा पनि बालिका बलात्कारका लागि फाँसीको सजायको प्रावधान छैन । यद्यपि त्यस्ता देशमा बालबालिकासँग यौन हिंसाका लागि कडा सजाय तय गरिएको छ।
सन् २०१६ मा हक–सेन्टर फर चाइल्ड राइटले संसारभरका मुलुकहरुमा बालिकाका साथ भएको यौन हिंसा र बलात्कारमा हुने सजायका बारेमा एउटा रिपोर्ट तयार गरेको थियो । उक्त रिपोर्टका अनुसार हरेक देशमा बालबालिकामाथि हरने बालात्कारमा अलग अलग सजाय दिने गरिन्छ ।
मलेसियामा बालिकाका साथ हुने यौन हिंसाका लागि सबैभन्दा बढी ३० वर्ष जेल सजाय र कोर्रा हान्ने सजायको प्रावधान छ।
सिंगापुरमा १४ वर्षकी बालिकाका साथ बलात्कारमा संलग्न अपराधीलाई २० वर्ष जेल, कोर्रा हान्ने र जरिवाना गर्ने सजायको प्रावधान छ।
अमेरिकामा बालबालिकाका साथ बलात्कारमा संलग्नकालागि पहिला मृत्युदण्डको सजायको प्रावधान थियो । तर कैनेडी बनाल लुइसियाना (२००८) मामिलामा मृत्युदण्डको सजायलाई असंवैधानिक घोषित गरियो । अदालतको भनाइ थियो कि जुन घटनामा मृत्यु भएन, त्यस्तो अपराधमा मृत्युदण्ड दिनु उचित छैन, अर्थात सजाय अपराधभन्दा बढी छ । त्यसैले अब ती राज्यहरुमा मृत्युदण्डको सजाय छैन ।
जुन देशमा मृत्युदण्डको सजाय छैन, त्यहाँ बालिकाका साथ बलात्कारको घटनामा सबैभन्दा कडा कानुन फिलिपिन्समा छ। फिलिपिन्समा बालबालिकाका साथ बलात्कार गरेको सावित भए दोषीलाई विनै कुनै छुट ४० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्दछ।
अस्ट्रेलियामा बालिका बलात्कार गर्नेलाई १५ देखि २५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ।
क्यानडामा बालिकाका साथ बलात्कारमा अधिकतम १४ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
इंग्ल्याण्ड र वेल्स
इंग्ल्याण्ड र वेल्समा बालबालिकामाथि हुने बलात्कारमा ६ वर्षदेखि १९ वर्षसम्म जेल सजायसहित आजीवन काराबासको सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ।
जर्मनीमा बच्चाका साथ बलात्कारपछि मृत्यु भए जन्मकैदको सजाय हुने प्रावधान छ। तर मात्र बलात्कारका लागि १० वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुन सक्दछ ।
दक्षिण अफ्रिकामा बलात्कारको घटनामा दोषी पाइए पहिलोपटक १५ वर्ष जेल सजायको प्रावधान छ। दोस्रो पटक पनि दोषी पाइए २० वर्ष जेल सजाय र तेस्रो पटक पनि दोषी ठहरिए २५ वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था छ।
न्युजिल्याण्डमा यसप्रकारको अपराधमा यो सजाय २० वर्षसम्म रहेको छ।
एमनेस्टी इन्टरनेशनलको २०१३ को एउटा रिपोर्टअनुसार संसारमा मात्र ८ मुलुकमा बाल अपराधीका लागि फाँसीको सजायको प्रावधान छ। यी देश हुन् चीन, नाइजेरिया, कंगो, पाकिस्तान, इरान, साउदी अरेबिया र सुडान ।
‘हक’का सह निर्देशक भारती अलीका अनुसार–संसारका अधिकांश देश फाँसीमाथि रोक लगाइरहेका छन्। तर हामी पछाडि पर्कदै छौ । जुन मानिस बालिका बलात्कारका मामिलामा फाँसीको वकालत गरिरहेका छन्, उनीरुले सोच्नु आवश्यक छ कि बलात्कारीलाई फाँसी हुने हो भने हरेक अपराधीले बलात्कारपछि बालिकाको हत्या गर्न सक्दछ । हामीले यो तर्कमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
स्मरणरहोस् हरेक देशमा नाबालिग र बलात्कारसम्बन्धी परिभाषा पनि फरक फरक रहेको छ । सरोज सिंह, बीबीसी हिन्दी
Previous post: यस्तो रहेछ यौन सम्बन्धका लागि उपयुक्त समय
Next post: तपाईलाई थाहा छ बेसारको महत्व ? बेसारले रोक्छ हृदयघात